एक अध्ययन अनुसन्धानमा एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन युवतीहरु ? :: Nepal Post Dainik एक अध्ययन अनुसन्धानमा एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन युवतीहरु ? | Nepal Post Dainik
आज: | Thu, 16, Sep, 2021
एक अध्ययन अनुसन्धानमा एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन युवतीहरु ?
August 9, 2019 मा प्रकाशित
एजेन्सी ।स्तनको स्पर्शले महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको रट्जर्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान यौ*न संवेदनशीलताको कारण यी दुइ अंगबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो।
आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अनुसनधानकर्ताहरुले २३ देखि ५६ वर्ष सम्मका ११ जना महिलालाई उनीहरुको योनी र स्तनलाई सुम्सुम्याउन अह्राएका थिए । यसरी सिर्जना हुने उत्तेजनाका बेला उनीहरुको मस्तिष्कमा हुने परिवर्तनको अध्ययन गर्न मस्तिष्कलाई ब्रेन स्क्यानर भित्र राखिएको थियो ।
त्यसक्रममा प्राप्त तस्वीरहरुले यो*नी र स्तन दुबैबाट प्रवाह हुने उत्तेजना स्नायु हुँदै मस्तिष्कको क्लस्टर अफ ग्रेप्स भन्ने ठाउँमा गएको पाइयो । पुरुषमा पनि लिं*गबाट प्रवाहित हुने उत्तेजना सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ । यसरि समाउद बढी भन्दा बढी आनन्द आउछ ।
एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन महिलाहरु ?
यौनको मामलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले गरेको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न ।
तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ ।
अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त ? अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अंगलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्नुहुन्छ ।
तर याद गर्नुहोस्, तपाईंका प्रत्येक स्पर्ष अति नै नरम र सरल हुनुपर्छ किनकी छालाले नै तपाईले दिएको प्रत्येक झड्कालाई मष्तिष्कसम्म पुर्याउने काम गर्दछ ।अण्डहरुलाई जोशमा कहिले नि थिच्ने अनि चेप्ने गर्नु हुँदैन जसले पुरुष मित्रको यौन प्रतिको जोशलाई तत्काल नै खत्तम गरिदिन्छ ।
आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नको लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ । मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो ।
औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बिचभागमा हल्का दबाव दिनुस । फलस्वरुप तपाईंको यौन साथीको लिंगलाई सधैं खडा गरिरहन्छ । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई यौनको मज्जा लिन दिन सक्नुहुन्छ ।
गर्भ नबस्ने समस्या छ ? यसो गर्नूस्
नेपालले टस जितेर ब्याटिंग गर्दै
यातायात कार्यालय लहानले नागरीक संतुष्टि गर्ने कामलाई निरन्तरता दियोस प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेल
यातायात कार्यालयमा भएको कमिकजोरीलाई आत्मसात गर्दै,नयाँ गतिविधिका साथ कार्य अगाडि बढाउने: कार्यालय प्रमुख भट्टराई
मेरो सम्पुर्ण परिवार माथी लगाएको आरोप झुठा र तथ्यहिन रहेको आरोपी यादव
भगवानपुर गाउँपालिकाको विकास,समृद्धि; अबको अनुभुति-अध्यक्ष यादव